Internet Ministries - Machechi aKristu Anokugamuchirai
Ikereke dzaKristu Dzinokugamuchirai
"Kwazisanai nekutsvoda kutsvene. Makereke aKristu anokukwazisai."- VaRoma 16: 16
Kugamuchirwa ku-website yedu. Kushanya kwako pano kunofanirwa zvikuru, uye tinonyengetera kuti iwe unoda kutishanyira mumunhu kana tichinamata Ishe wedu Mwari Wamasimba Ose pamwe semhuri imwechete.
Pane iyi webhusaiti iwe unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pemachechi aKristu. Iwe unogona kusayina zveBhaibheri mabhuku ehurukuro, kana iwe ungatitaurira isu pamusoro pemibvunzo chero ipi zvayo yaungave nayo pamusoro peBhaibheri.
Ikereke yaKristu ndeye mhuri yevana vaMwari avo vanoponeswa nenyasha dzaMwari uye vakazvipira kushumira Ishe wedu nevamwe vedu. Kune ungano dzakawanda dzekereke dzaKristu kuburikidza nenyika. Mukereke yaIshe uchawana vanhu vezera rose uye kubva kune mararamiro mazhinji ehupenyu avo vakadanwa muhukama hwakabatana rwe rudo nekugamuchirwa. Tinofara nezvipo zvinokosha izvo Ishe akatipa, uye isu tinoda kugovana zvipo nezvikomborero newe. Ndapota zivai kuti kune nzvimbo inokosha iwe nemhuri yako pakati pemakereke aKristu.
Kana iwe usingagoni kuona mhizha pamusoro apa - download pano: MP4